Home News Ururka Al Shabaab oo weerar ka geeystay gudaha Dalka Kenya
Shan qof ayaa ku dhaawacantay dalka Kenya nin u dhashay dalka Talyaaniga waa la Afduubtay ka dib markii dagaallyahano lagu tuhunsan yahay Shabaab ay weerar ku qaadeen goob looga dukaameysto.
Weerarka ayaa ka dhacay xarunta dukaamada ee Chakama oo ku taalla degaanka Kilifi hoos yimaada Magaalada Mombaza ee dalka Kenya.
Rag hubaysan aya xalay saqdii dhexe weerar ku qaaday Suuqa.
Sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska ayaa Shabaab ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen Weerarkaasi.
Previous articleDuqeyn lagu beegsano xubno sare oo ka tirsan Ururka Al Shabaab oo ka dhacday Gobolka Mudug
Next articleR/wasaare Itoobiya Abiy Axmed oo eedeeyn xoog leh la kulmaya
Madaxweyne Farmaajo’Ceebtaada waxaa la yaaban Dunida ee Fadlan Jawaari Haka Harin’’